အဆင့်အတန်း မြင့်မားတဲ့စိတ် | မေတ္တာရိပ်
လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ ကျက်သရေ →
အဆင့်အတန်း မြင့်မားတဲ့စိတ်	Posted on August 14, 2009	by mettayate ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားတဲ့သူဟာ သူတစ်ပါး ဒုက္ခ ရောက်အောင် မလုပ်ဘူး။
ခင်မင်လေးစားတဲ့စိတ်ဟာ အဆင့်အတန်းမြင့်မားတဲ့စိတ် ဖြစ်တယ်။
မေတ္တာစိတ် ကရုဏစိတ်က မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။
ကိုယ့်ဘ၀မှာ အရေးပါတဲ့သူရဲ့နေရာပေးမှု၊ အသိအမှတ်ပြုမှု၊ ခင်မင်မှု ကို ရနေမှ ဖြစ်မယ်။
လူတွေရဲ့ လိုလိုချင်ချင် နေရာပေးမှု၊ အသိအမှတ်ပြုမှု၊ ခင်မင်မှုကို ရတဲ့သူဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုပြီးကျေနပ်တယ် ယုံကြည်မှု တိုးတယ်။
ကိုယ်ကလည်း သူတစ်ပါးကို လေးစားတတ်ဖို့ လိုသလို သူများကလည်း ကိုယ့်ကို လေးစားဖို့လိုတယ်။
(ဒါတွေကို ကလေးဘ၀တည်းက လိုအပ်တယ်။ ကလေးဘ၀ထဲက ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေ လေးစားတာ သိပ်လိုချင်တယ်။ ဒါဟာ လူတိုင်းရဲ့ဘ၀မှာ အရေးကြီးတဲ့လိုအပ်ချက်ပါပဲ။ အကယ်၍ အဲ့ဒါကိုမရခဲ့ရင် အဲ့ဒီလူဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနည်းမယ်၊ အားငယ်မယ်၊ ပြောရဲမဆိုရဲ ဖြစ်မယ်။ သို့မဟုတ် ဒေါသကြီးမယ်။ သူပြောချင်တာကို လူတွေက ဂရုစိုက်အောင် အကြမ်းနည်းနဲ့ လုပ်မယ်။ ပြေလည်တဲ့ဆက်ဆံရေးပုံစံကို မလုပ်တတ်ဘူး။)
This entry was posted in ကောက်နှုတ်မှုများ and tagged ဆရာတော် ဦးဇောတိက. Bookmark the permalink.	← လူအမျိုးမျိုး